Samachar Batika || News from Nepal » किन यति धेरै सुन्दरी हुन्छन ? चाइनिज युवतीहरु, यस्तो रहेछ कारण (तस्विर सहित)
किन यति धेरै सुन्दरी हुन्छन ? चाइनिज युवतीहरु, यस्तो रहेछ कारण (तस्विर सहित)
एजेन्सी : सौन्दर्य ताको कुरा गर्दा चाइनिज युवतीहरु अरु देश हरु भन्दा भिन्न प्रकारका हुन्छन ! चाइनिज युवतीहरुको सुन्दरता को चर्चा बिस्वमै हुन्छ।
चाइनिज युवतीहरुले आफुहरुलाई सुन्दर बनाउन को लागि बिभिन्न उपाएहरु अपनाउने गरेका हुन्छन ! त्यो कारण ले पनि चाइनिज युवतीहरु आफ्नो अनुहार बेदाग , चम्किलो अनि नरम छाला को लागि बिस्वभर परिचित छन् ! घरेलु तथा पारम्परिक तरिका अपनाएरकै भरमा सुन्दर देखिन्छन।
उनीहरु यति धेरै सुन्दर देखिएका हुन् ।सफा अनुहारको लागि चिनियाँ युवतीहरु पुदिना प्रयोग गर्छन्। पुदिनाको पात पिसेर अनुहारमा लगाएर सुकेपछि धुन सकिन्छ। अनुहारलाई चाउरीपनबाट बचाउन चिनियाँ युवतीहरु अण्डा प्रयोग गर्छन्।
अण्डाको सेतो भाग अनुहारमा लगाउनुस् अनि २० मिनेट पश्चात चिसो पानीले धुनुस्। अण्डामा हुने एस्ट्रिजेन्टले छाला कसिलो बनाउन मद्धत गर्छ। यसको साथै चिनियाँहरु मसाजमा विश्वास गर्छन्। मसाजले रक्त सञ्चार बढ्छ र कोषहरुको ‘रिजेनेरेशन’ बढ्छ जसको कारण आँखा सुन्निएको जस्तो हुन कम हुन्छ। चिनियाँ युवतीहरु चामलको पानीलाई टोनरको रुपमा प्रयोग गर्छन्।
यसको लागि पालिस नगरिएको चामललाई एउटा भाँडोमा राखेर भिजाउँनुस। केही समयमा माथी सेतो तह देखिन्छ। त्यसपश्चात पानी मात्र छानेर त्यसलाई फ्रिजमा राख्नुस्। यो पानी तीनचार दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। कपासको मद्धतले यो अनुहारमा लगाउनुस्।
तीनचार दिन पश्चात फेरि यसरी नै नयाँ पानी बनाएर फ्रिजमा राख्नुस्। चिनियाँ युवती ग्रिन-टीको सहयोग लिन्छन्। हरेक दिन बिहान कप ग्रिन टि पिउँनाले पेट स्वस्थ्य हुनुको साथै नियमित प्रयोगले जवान देखिन मद्दत गर्छ।
चाइनिज युवतीहरुले आफुहरुलाई सुन्दर बनाउन को लागि बिभिन्न उपाएहरु अपनाउने गरेका हुन्छन ! सौन्दर्य ताको कुरा गर्दा चाइनिज युवतीहरु अरु देश हरु भन्दा भिन्न प्रकारका हुन्छन ! चाइनिज युवतीहरुको सुन्दरता को चर्चा बिस्वमै हुन्छ। जसको केही जानकारी माथी दिईसकेका छौ ।
प्रकाशित मिति १७ असार २०७७, बुधबार ०६:२६